October | 2010 | Zizawa's refuge
GIRI Relief Fund
Posted by zizawa ⋅ 25/10/2010 ⋅ Leaveacomment
A local charity called Link Emergency Aid & Development is now accepting donations for the GIRI survivors. LEAD team will be distributing emergency supplies to the survivors in the worst-hit areas. To donate via paypal, click donate on http://www.lead-ngo.org. To send funds toaUK oraSingapore bank account, pls contact donations@lead-ngo.org To donate … Continue reading →
Posted by zizawa ⋅ 15/10/2010 ⋅9Comments
Li Xiaobo ဟာအင်မတန်မှ လေးစားဖို့ ကောင်းတဲ့လူ။ ဒါဟာ သူနိုဘယ်ဆုရလို့၊ ရမှ ပြောတဲ့စကား မဟုတ်ဖူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ တရုတ်ပြည်မှာ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်သူတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီက မင်းကိုနိုင်တို့လို သူရဲကောင်းတွေထက် အများကြီး ပိုသွေးပျက်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေရှိတယ်။ ဗမာပြည်မှာ စစ်အုပ်စု ယုတ်မာရက်စက်တာ၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်တာ၊ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ လုပ်နေတာတွေက သိပ်ထင်ရှားတော့ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ကြည့်မြင်တတ်တဲ့သူတယောက်အတွက် (ဘိုလိုဆိုရင် observant ဖြစ်တယ်လို့ ပြောမလား) က စစ်အုပ်စုဟာ အဖြူလား၊ အမဲလား သဲကွဲတယ်။ ဒီတော့ ဗမာပြည်မှာ စစ်အုပ်စု လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ ဘုရားအလောင်း စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ ထောင်မကြောက်၊ တန်းမကြောက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကို morally conscientious ဖြစ်တဲ့လူ … Continue reading →
Crito ကပြီးဖို့ နှစ်ခန်းလောက်ပဲ လိုတော့တယ်။ အဲဒိနှစ်ခန်းမှာ Socrates က သူ့ကိုသတ်ဖို့ ဖမ်းချုပ်ထားတာဟာ မတရားဘူးဆိုတာ သိလျက်နဲ့ ဘာ့ကြောင့်ထွက်မပြေးသလဲဆိုတာကို ကျိုးကြောင်းပြထားတယ်။ ဒီတော့ ဒီနှစ်ခန်းဟာ (၅၀ နောက်ပိုင်းကနေ အဆုံးထိ) တအုပ်လုံးမှာ အရေးကြီးဆုံးအခန်းတွေပဲ။ ဒီအခန်းနှစ်ခန်းကို မဆက်ခင် ခုရေးခဲ့ပြီးသလောက်မှာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့၊ သေချာ စဉ်းစားသင့်တယ်ထင်တာ တခုရှိတယ်။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတာ ခုအခန်းမှာ ကြည့်ရအောင်။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ Socrates ကို အေသင်အာဏာပိုင်တွေက သေဒဏ်ပေးတာကို Socrates ကိုယ်တိုင်က မတရားလုပ်တာလို့ လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မတရားမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကို လက်ခံရင် ကိုယ့်ကိုမတရားလုပ်ရင်တောင် မတရားပြန်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ Socrates ကပြောထားပြီးသား။Now my question is: Do you … Continue reading →